Ukuvikela Kwezifuyo Zabafuyi beZingulube
Kuyini Ukuvikela izifuyo?
Ukuvikela izifuyo kuyisethi yezinyathelo noma imithetho yokuvimbela ukwethulwa kwezifo epulazini nokusabalaliswa kwezifo noma izifo eziphilayo epulazini.
Izifo Ezimbi Zezingulube
Izifo ezithathelwanayo nezinambuzane eziningi zingasakazeka ngokushesha ezigodini zibe yingulube nakwezingulube ziye kwezinye izilwane. I-African fever fever (ASF) kanye nesifo somlenze nomlomo (FMD) yizibonelo zezifo ezonakalisayo ezingulube, ezingabangela ukulahlekelwa okukhulu. INingizimu Afrika inezo zombili lezi zinambuzane emhlambini wethu wezwe, okwenza umonakalo omkhulu emakethe yokuthekelisa. Lokhu kuyoba kubi nakakhulu uma umnyango wezilwane wezokwelapha ungazange ugcine ukulawula okuqinile kuzo zonke izici zokungcoliswa kwezwe kwezingulube.
Kuneziqondiso eMthethweni wezeMpilo wezilwane ezidinga abanikazi bezilwane ukuba babike izinombolo ezingavamile zokufa emhlambini wabo wezilwane ehhovisi eliseduzane lesifundazwe sezilwane.
Izifo zeIngulube Zisakazeka Kanjani?
Izifo zisakazwa kusuka ezilwaneni kuya ezilwaneni ngezindlela ezahlukene, kodwa ikakhulukazi ngokuxhumana okude noma ukungcola kwemvelo. Izifo kanye nezinambuzane nazo zingasakazwa nge-feed noma izinto zokwakha izindlu. Kodwa ezimweni eziningi kungenxa yokuxhumana nezilwane ezigulayo noma ezifayo, isifo sohudo noma ukukhwehlela, ukuklabhula, ukwabelana ngesigaba esifanayo noma ukutholakala kwamanzi noma ukudla okuthelelekile.
Izifo ngezinye izikhathi zingasakaza ezindaweni ezikude noma ngisho namazwe ngokuthunyelwa kwezilwane nezilwane eziphilayo.
Khumbula ukuthi izifo nezinambuzane zizovela njalo kwezinye izingulube, abantu, izicathulo, ukudla, izimoto nezinambuzane.
Ezinye izilwane ziphila isikhathi eside kunabanye, ezinye zibhujiswa ngokushisa, izibulali ezibulala amagciwane, izibulala-zinambuzane noma zomisa kodwa ngokuvamile kuthatha ukuhlanza ngokuphindaphindiwe kanye nesikhathi (izinsuku eziningana) ukuze ziphumelele.
Indlela Yokwakha Isistimu Yokuvikela izifuyo?
Ukuphumelela kwesimiso sezinhlayiya kubalimi bezingulube abaqonda ukuthi izingulube zabo ngeke zithatheleleke uma zigcinwa kude nezinye izinkomo zezingulube. Ukudla ngokweqile emapulazini egobe kungasetshenziswa ngezindlela ezilandelayo:
Fence impahla yakho ngokuphepha ukuze izingulube zakho zingakwazi ukuphuma noma ezinye izingulube endaweni angakwazi ukungena. Uma izingulube zakho zigcinwa esakhiweni, qinisekisa ukuthi imfucuza, amanzi okudoba emanzini kanye nokuhlanza amanzi ezigodini zezingulube zibhekwa ngaphakathi kwakho impahla. Sebenzisa umquba wengulube kanye nokulala ukuze uthole umquba, ngaphakathi kocingo epulazini lakho.
Yazi ukuthi izingulube zakho zivelaphi.
Ungalokothi uqalise izingulube ezintsha emhlambini wakho kusuka emithonjeni engaziwa kanye nabacabangi. Ngisho noma bengalethi izifo ezibhubhisayo kanye nezifo eziphazamisayo, kukhona ithuba elihle lokuthi izinkinga zabo zezinkhumba ezijwayelekile zizohlukahluka ngokwakho. Buza udokotela wezilwane wasekhaya noma udokotela wezempilo wezilwane (AHT) ngolwazi.
Gcina abantu kude nezingulube zakho.
Lokhu kubandakanya omakhelwane, izivakashi, abathengisi, ababheki, abacwaningi, abahloli kanye nezikhulu zikahulumeni. Noma ubani onesizathu esihle sokuba epulazini futhi asuka epulazini kuya epulazini kumele anikezwe ngama-overalls kanye nezicathulo ezilahlayo (ama-plastic overshoes alula futhi angabizi) uma engena epulazini. Lawa kumele alahlekelwe, ngemuva kokusetshenziswa, epulazini. Iningi labantu lingakwazi ukuqhuba ibhizinisi labo kule ndawo.
Izimoto ezisetshenziselwa ukulayisha izingulube, ukulayishwa okuphakelayo noma ezinye izinto zingenza kanjalo ngokusebenzisa isango elihlukile emcimbini ongenhla. Le ramp yokulayisha kumele ibe yindawo yokuphakama kwesokudla imoto ehlanganiswa ne-pig gangway ngaphakathi.
Ukudla Nemithi Yezingulube
Ama-pig anezinhlobonhlobo ezinkulu futhi azikhathali ngalokho azidlayo, kodwa azoba nempilo futhi akhule ngokushesha uma ezondliwa ngokudla okunokulinganisela kwezingulube ezivela kubambisene noma inkampani yokuphakelayo okungenani ingxenye yesilinganiso sabo.
Ngesikhathi abalimi bezingulube befuna ukondla 'i-swill' (ukudla okusele kwesokunxele, ukukhishwa kwekhishi kanye nokudla okudlulile "ngaphambi kwesikhathi" ngaphambi kwalokho) imithethonqubo idinga ukuthi zonke 'swill' ziphekwe imizuzu engama-60 ngaphambi kokuba zondliwe ezingulube. Asikho isidumbu sezilwane noma izinkukhu okufanele sondliwe nhlobo.
Kukhona imithi kanye nemigomo eye yaba yingxenye yokugcinwa kwengulube evamile futhi lokhu kungaba nomphumela omuhle ekukhiqizeni nasezempilo. Lezi zibiza kakhulu kanti ezinye zidinga ukunakekelwa kwezilwane ezivela kudokotela wezilwane oxhumana naye onolwazi olunempilo emhlambini wakho.
Utholaphi Ulwazi Lokuvikela izifuyo?
Ulwazi lwezingulube luhlala lukhona ngeminyango yezilwane, i-Pig Veterinary Society, i-SA Pork Producers 'Organization (SAPPO) kanye neminyango yezolimo ezifundazweni ngasinye.
Ukwaziswa kungenxa yezemfundo nolwazi kuphela futhi angeke kuthathwe njengeseluleko sezokwelapha. Ulwazi aluhloselwe ukufaka iseluleko sezokwelapha noma ukwelashwa okuhlinzekwa ngudokotela wakho wezilwane.